Garagalcha wantoota filatamman tokko ykn tokko olii hojadhuu.
Gulaali - Baayyisi Filaadhu
Bayi`ina garagalchaa garagalchuu barbaadu galchii.
Gattiwwan yabbinaa fi hojjaa wanta filatamee saanduqa qoota sixxee X fi sixxee Y kessattii galchaa akkasumas halluu guutii wantichaas saanduqa jalqabaa kessatti galcha. Kofnii marsaa wantaa filatamee hn galuu.
Iddoo fi marsaa wanta baayi`ifamee wantoota filatammee waliin madaaluun qindessa.
Wirtuu wanta filatamee fi wnta bayi`ffame gidduu qabenya sardalaa galchi. Gatiiwwan pozativii wanta baayiffammee gara olittii xiyyefammu jijjiiran gatiileen negaativii immoo gara gadittii jijjiruu.
Kofa wanta bayi`iffammee ittii naannesuu dandessuu (digrii 0 hanga 359)galchii. Gatileen pozativii wanta baayifamee bita gara mirgattii yemuu marsan gatileen negativii ammoo mirga gara bitaati naanessu.
Hamamtaa wanta baay`iffamee ifteessa.
Hangamtaa yabbina wanta baayi`ifammee ittii dabaluu ykn hir`isuu barbaaddu galchi.
Hangamtaa hojjaa wantaa baay`ifammee ittin dabaluu ykn hir`isuu barbaadu sana galchii.
Wantoota filatamaniif akksumas wantoota baay`iffamaniif haallu iftessa. Yoo garagalcha tokko olii garagalchittee, haaluwwan kunneen garagartoo qaphxii haalu jalqabaa fi maayyii qindessuu.
Wantoota filatamanii haaluu filadhu.
Wantoota baayifameef haalu fili. Yoo garagalcha tokko olii kastee jirattee, haalluun kunii gragalcha maayyitiif fayyada.
Osoo durtiiwwan irra deebi'anii hin naqamiin dhugoomsi hin mul'atu.
Title is: Baayyisuu